उच्च रक्तचाप र हर्टअट्याकबाट बचाउँने ६ पेय पर्दाथ, नियमित सेवनले हुदैन हर्टअट्याक (भिडियो सहित) - ज्ञानविज्ञान
तपाई सुन्न तथा हेर्न मन पराउँनुहुन्छ भने पोस्टको अन्तिममा भिडियो हेर्नुहोला ।
खानपान शैली र हामी नेपालीको अन्य शारिरिक व्यवहारका कारण आजभोली उच्च रक्तचाप धेरै नेपालीहरुको साझा समस्या बनेको छ । आफ्नो परिवार वा छरछिमेकमा हेर्ने हो भने उच्च रक्तचापको समस्या झेलिरहेकाहरु देख्न सकिन्छ । उच्च रक्तचाप मात्रै होइन कि यसका कारण हुने मुटुरोग सम्बन्धि रोगीहरुको संख्या पनि नेपालमा बढ्दो छ ।
रोगहरुको मुख्य कारण खानपान र दैनिक जीवनमा हुने शारिरिक व्यवहार नै हो । यसैले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न र मुटुरोगको जोखिम घटाउनको लागि मुख्य त हाम्रो खानपानको शैली र आहारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हुन त औषधिहरुले पनि रक्तचापलाई कम गर्न सहयोग गर्छ तर हामीले आफ्नो खानपानमा थोरै ध्यान दिने हो भने पनि उच्च रक्तचापको समस्याबाट बच्न सकिन्छ र औषधीको प्रयोग गरिरहन नपर्ने हुन सक्छ ।
तर कसैले यस अगाडी नै औषधीको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने चै यहि भिडियो वा अन्य जानकारीको भर परेर औषधीको सेवन बन्द नगर्न हामी अनुरोध गर्छौँ । आफुले सेवन गरिरहेको कुनै पनि औषधीको सेवन फेरबदल गर्न वा बन्द गर्न तपाईले डाक्टरको सल्लाह लिनै पर्छ ।
यहाँ हामीले उच्च रक्तचापको औषधी खाइरहेकाहरुका लागि सहयोगी हुने र उच्च रक्तचापबाट ग्रसित नभएकाहरुलाई त्यसबाट बचाउँने खानपिनका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
उच्च रक्तचाप रोगीलाई दिइने सबैभन्दा आम सल्लाहमा हो नुन, चिल्लो र धेरै क्यालोरी हुने खानेकुराको कम खाने । उच्च रक्तचापको समस्या भएका बिरामीले आफ्नो आहारमा नियमित रुपमा सागसब्जी, फलफूलको सेवन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको सल्लाह मान्ने हो भने उनीहरुले तपाईंलाई क्याफिन युक्त पेय र अल्कोहलको सेवनबाट टाढा रहन सुझाव दिन्छन् । यी दुई पेयको सेवन नगरेमा हामीले उच्च रक्तचाप कम गर्न सकिन्छ किनभने स्वास्थ्यको लागि यी दुवै चीज धेरै नै खतरनाक छन् ।
आज हामी तपाईलाई यस्तै केही पेय पदार्थको बारेमा बताउन गइरहेका छौं जसले उच्च रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिमलाई कम गर्न सघाउँछन् ।
तपाईले यी पेय पदार्थलाई नियमित सेवन गरेर उच्च रक्तचापको जोखिम कम गर्न सक्नुहुनेछ । ति हुन् :
पानी तपाई नियमित नै पिउँनुहुन्छ तर रक्त शुद्धिकरणका लागि उपयुक्त मात्रामा पानी पिउँनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ । यदि तपाई दैनिक ३ लिटर पानी पिउँनुहुन्न भने तपाई धेरै रोगहरुको जोखिममा हुनुहुन्छ । नियमित ३ लिटर पानी पिउँदा रगत शुद्ध बनाउँने मात्रै होइन, शारिरको मेटाबोलिजम पनि राम्रो हुन्छ ।
याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने दिनमा ३ लिटर पानी एकदमै धेरै धेरै पिएर पुर्याउँने भन्दा पनि थोरै थोरै गर्दै पटक पटक पिउँनु राम्रो हुन्छ । खाना खानु भन्दा केहि बेर अगाडी देखि खाना खाएको कम्तिमा आधा घण्टा पछिसम्म भने धेरै पानी पिउँनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
२. एप्पल साइडर भिनेगर
एप्पल साइडर भिनेगर उच्च रक्तचापबाट बँच्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । यसमा पोटेसियमको मात्रा निकै राम्रो हुन्छ । यसको दैनिक सेवनले शरीरबाट सोडियमको अतिरिक्त मात्रा र विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ ।
यसमा पाइने रेनिन एन्जाइमले रक्तचाप लाई कम गर्छ । तपाईंले एक गिलास पानीमा एक चम्चा मह र एप्पल साइडर भिनेगरलाई मिसाएर बिहानै पिउनुभयो भने यसले धेरै फाइदा गर्छ ।
३. कागती पानी
कागती पानीले शरीरको कोषहरुलाई सफा गर्छ । यस बाहेक यसले रक्तनलीहरुलाई नरम र लचिलो बनाउँछ जसले रक्तचाप कम गर्छ ।
कागती पानीमा भिटामिन सि हुन्छ जसले शरीरबाट मुक्त कणहरुलाई हटाउन एन्टिअक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ । हरेक विहान एक गिलास कागती पानीको सेवनले रक्तचापको स्तर नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ ।
४. मेथी पानी
मेथी पानीमा अधिक फाइबर हुन्छ । जसले तपाईंलाई रक्तचाप नियन्त्रित गर्न मद्धत गर्छ । हरेक विहान खाली पेटमा एक गिलास मेथी पानी पिउनाले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
५. चिल्लो रहित दूध
चिल्लो कम भएको वा फ्याट बिनाको दूधलाई पोटासियम र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यी दुवै पोषक तत्वले रक्तचापलाई व्यवस्थित राख्न मद्धत गर्छ ।
तर यसका विपरित बढि चिल्लो या फ्याट भएको दुधको सेवनले भने स्वास्थ्यमा उल्टो समस्या पार्न सक्छ । त्यस्तो दुधमा रहने पाल्मेटिक एसिडले रक्त नलीलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ र रक्तचाप बढ्छ ।
६. चियापत्ति र पानी
चियाको पत्ति ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको राम्रो स्रोत हो । यसले रगतलाई पातलो बनाउँछ र रक्तचापलाई कम गर्छ ।
आधा घन्टासम्म पानीमा चिया दाना भिजाएको पानी पिउँने गर्नुहोस् । यसलाई लगातार एक महिनासम्म पिएमा तपाईंले प्रभावकारी असर देख्न सक्नुहुन्छ ।
Don't Miss it वास्तुशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले हरेक साँझ सम्झिनै पर्ने कुराहरु, जसले ल्याउँछ घरमा सुख र समृदि
Up Next ७ गल्तिहरु जसले मधुमेह वा डायबिटिज लगाउँछ र ७ खाना जसले हटाउँछ, जानी राखौँ
पानी कम हुँदा निम्तिन्छ यी १० समस्या
केही खानेकुरा नखाई मानिस एक दुई दिन बाँच्न सक्छ। तर, पानी बिना भने प्राय असम्भव छ। पानी जीवन हो ।…
अण्डा खानुका फाइदा, यस्ता छन्
अण्डा एउटा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा हो । जुन मानिसको जीवनमा अति नै आवश्यक पर्छ । केटा केटि देखि लिएर बुडा बुडीको…